October 13, 2021 - Online Hartha
October 13, 2021 by Online Hartha
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပြောကြောင့် ဆွမ်းပင်မယူတော့ပဲ မျက်ရည်ကျပြီးလှည့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ ဦးဇင်းလေး
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ပြောဆိုမှုကြောင့် ဦးဇင်းလေးတစ်ပါးက ပြန်ရေးထားတာလေးပါ။ ဘုန်းကြီးဆိုတာ သူတောင်းစားတွေပါဆိုတဲ့ အဖြစ်အပျက်ဘုန်းကြီးတွေကို သူတောင်းစားလို့ပြောတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့် ဦးဇင်းလေးတစ်ပါးက ပြန်ရေးထားတာလေးပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ဘုန်းကြီးဆိုတာသူတောင်းစားတွေပါ မိုးမလင်းသေးဘူး သူများအိမ်ရှေ့ တံစက်မြိတ်အောက်မှာ ခွက်အမည်းကြီး ပိုက်ပြီး တန်းစီးပြီး တောင်းစားနေတာ ကျုပ်တို့တွေပါ။ ဒီသာသနာထဲ ဝင်လာရင် ဒီလို ကဲ့ရဲ ပြစ်တင် ဝေဖန်မယ်ဆိုတာ သိနေပါလျက် ဇွတ်ထိုးပြီး ကတုံးတုံး သင်္ကန်းဝတ်ခဲ့ကြတာ ဒီ သူတောင်းစားတွေပေါ့။ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးက မရှိ၊ တစ်လတစ်ခါ လစာရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း မဟုတ်လို့ တောင်းစားမိတာ ခွင့်လွတ်ပါဗျာ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ သားတော်တွေမို့ရှေ့ရှေ့ဘုရားရှင်တို့် ပညတ်ထားတော်မူသည့် ဝိနည်းစည်းကမ်းတွေထဲာင်းစားရမယ်လို့ ပညတ်ထားတော့ကျုပ်တို့လည်း တောင်းစားရတာပေါ့။ အများထင်သလို သာသနာ့ဘောင်ကအနေလည်းမချောင်၊ အစားလည်းမချောင်ပါဘူး။ဒါကို ကိုယ်တိုင်းဝတ်ဖူးမှ စာနာ နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ဦးဇင်းတို့လည်း … Read more
Facebook သုံးနတေဲ့ မိနျးကလေးမြားဖတျရနျ တကယျ့ဖွဈရပျမှနျ ဇာတျလမျးလေးပါ
fbသုံးနေ တဲ့မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အနည်းငယ်သာပြောင်း၍ရေးပါသည် …. ။ တစ်နေ့ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လူလတ်ပိုင်းဓာတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခု မက်ဆင်ဂျာကနေညီမလေး အစ်ကိုစကားနည်းနည်း ပြောချင်လို့ ရလား “ဆိုပြီးစာဝင်လာတယ်။ အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ လို့ရေးမိလိုက်တာနဲ့ဗွီဒီယိုကော ခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။ ရုပ်ဖြောင့်သလောက် အပြော ကောင်းလွန်းလှတဲ့သူ့ စကားတွေကြားမှာဖုန်းကို ပိတ်မပစ်ရက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ”အပျိုလား” ဆိုတဲ့သူ့စကားကကျမကို နည်းနည်း တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ ခနလောက်ငိုင်နေပြီးမှကျမယောင်္ကျားနဲ့ ကျမ အတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံ ပို့ပေးလိုက်တယ် ။ “ညီမတို့ ချစ်သူတွေလား “ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးက ကျမကို ကြည်နူးသွားစေပါတယ်ဘေးနားမှာ အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့သားလေးကို မလုံမလဲ ကြည့်လိုက်မိတယ်ကျမယောကျား လူရိုးကြီးကတော့ယာတောကပြန်မလာသေးပါဘူး ကျမ ထင်လိုက်တာကတစ်ခါတည်းနားအေးအောင်ဆိုပြီး အမှန်ကိုချပြလိုက်တာမှ ပိုဆိုးသွားပါတယ် တိုတိုနဲ့လိုရင်းကိုပြောရရင်ကျမ တို့ နေ့တိုင်းဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဖုန်းမလာရင်ကျမကစခေါ်တတ်နေပါပြီကျမယောက်ျား လူရိုးကြီးကတောဘာမှမသိရှာပါဘူး။ သူ့ကတော့ ကျမကိုသိပ်ပြီးဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူးယာတော နဲ့အိမ် … Read more
အိပ်မက်ယောင်ရင်း ရည်းစားဟောင်းဧ။်နာမည်ကို အော်ခေါ်မိခဲ့ရာမှ
လူသားတိုင်းက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအပေါ်တွင် ကိုယ်မဟုတ်တဲ့အခြားသူများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး ခေါ်ပြောတာဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲလုပ်လုပ် အမြဲလိုလို သဝန်တိုကာ စိတ်ဆိုးတတ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတွင် ဇနီးဖြစ်သူသည် ခင်ပွန်းအပေါ် အရမ်းသဝန်တိုစိတ်ကြီးကာ ခင်ပွန်းသည်မှာ အိပ်ပျော်နေရင်း အိပ်မက်ယောင်တတ်သည့်အကျင့်ရှိခဲ့ရာ အရင်ရည်းစားဟောင်းမိန်းကလေးဧ။် နာမည်ကို ကျယ်လောင်စွာ အော်ခေါ်မိခဲ့သည်။ ကံဆိုးစွာပဲ ထိုညတွင် ဇနီးဖြစ်သူမှာ အိပ်မပျော်သေး၍ နံဘေးကခင်ပွန်းအော်လိုက်သည့် နာမည်ကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားခဲ့၍ သဝန်တိုကာစိတ်ဆိုးပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူမျက်နှာကို ဖြန်းခနဲရိုက်ပစ်ခဲ့သည်။ ဇနီးသည်ဧ။် ဒေါသအရှိန်ကြောင့် ရိုက်ချက်မှာ အားအရမ်းပါသွားသည့်အတွက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူခမျာ သွားတစ်ချောင်းပါ ကျိုးသွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဇနီးဖြစ်သူသည် ရွှေထည်ဆိုင်သို့ သွားပြီး ခင်ပွန်းသည်အား မြင်လိုက်တိုင်းအမှတ်ရနေအောင် ကျိုးသွားသည့်သွားနှင့် လက်စွပ်တစ်ကွင်းလုပ်ပေးခဲ့ပြီး ဝတ်ဆင်ခိုင်းခဲ့သည်။ အိပ်မက်ယောင်ရင်း ရည်းစားဟောင်းဧ။်နာမည်ကို အော်ခေါ်မိခဲ့ရာ ဇနီးဖြစ်သူမှ သဝန်တိုပြီး ရိုက်လိုက်၍ သွားတစ်ချောင်းလုံး … Read more
ဝကျသားစားနိုငျပွီလား မိတျဆှေ (၁မိနဈအခြိနျပေးဖတျပါ မဖတျလိုကျရလြှငျနောငျတရလိမျ့မညျ)
ရှေးရှေးတုန်းကရွာတရွာမှာ အလွန်ချစ်ခင်ကြသော ကျော်နိုင်နှင့် မောင်မြင့်ဆိုသော ငယ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိလေသည်။ သူတို့နှစ်ဦးလုံးသည် တနေ့လုပ်မှတနေ့စားရသော အခြေခံ လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားများဖြစ်သဖြင့် ခက်ခဲပင်ပန်းစွာဖြင့် ဘဝကိုဖြတ်သန်းလာကြရလေသည်။ အလုပ်ဆိုလျှင်လဲ ဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံရာကျပန်း လုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြရသူများဖြစ်လေသည်။ တခါတလေ အလုပ်ကလေးအဆင်ပြေလို့ ငွေလေးမဆိုသလောက်ရွှင်တဲ့အခါရှိသလို တခါတလေလဲအလုပ်မရှိ၍ ထမင်းပင်နပ်မမှန်ချေ။ဆောင်းရာသီအစတခုတွင် သူတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံး အိမ်ဆောက်လုပ်ရေးတခုတွင် လက်သမားအလုပ်ရလိုက်၍ ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးနဲ့ စိုစိုပြေပြေလေးဖြစ်လာလေသည်။တနေ့သောအခါ၌ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံး အလုပ်သိမ်းချိန်တွင် လုပ်အားခပိုက်ဆံထုတ်ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြရာ ဈေးလမ်းသို့ရောက်သောအခါ မောင်မြင့်သည် ဝက်သားအရမ်းစားချင်သည်ဟုဆိုကာ ဝက်သားငါးဆယ်သားဝင်၍ ဝယ်လေသည်။ တဆက်ထဲမှာပင် ကျော်နိုင်ကိုလဲ လှမ်းပြောလိုက်လေသည်။ ” ဟေ့ကောင်ကျော်နိုင် မင်းလည်းဝက်သားမြင်ရင် မနေနိုင်အောင် ကြိုက်တဲ့ကောင်ပဲ ဝင်ငွေလေးကောင်းနေတုန်း မင်းအိမ်အတွက် ငါ့လိုဝယ်သွားလေကွာ ပိုက်ဆံရှိတုန်းလေး စားရတာဟ ။ ဝင်ငွေမရှိတဲ့အချိန်ကြမှ စားချင်ပါတယ်အော်နေလို့ ဘယ်သူမှလာမကြွေးဘူး ။ ဝယ်လိုက်လေကွာ” … Read more
ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ ကုဋေရှစ်ဆယ် သူဌေးသားကဗျာရဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခု
“ကုဋေရှစ်ဆယ်သူဌေးသားက သိပ်သနားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဆရာမ” မျက်ထောက်နီနဲ့ကြည့်တဲ့အကြည့် ကျွန်တော်သိတယ် ”နင်ကဘာသနားတာလဲ” ”နင်သာလူမိုက် ဒုစရိုက်တဲ့လားဆရာမရယ် သူက ဘာမဟုတ်တာလုပ်လို့လဲ”ဆရာမ မျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တယ် ဘာမှမပြောသေးဘူး ”သူ့ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံလည်းအခိုးခံရတယ် လူတွေက ကျေးဇူးတရားနားမလည်ကြဘူးနော်” ”သူကပညာမှမတတ်တာ” ”ပညာမတတ်ရင် နှလုံးသားမဲ့ရောလားဆရာမ သူ့ပစ္စည်းတွေ အခိုးခံရတာတောင် ပြန်ပြီး မခိုးရကောင်းမှန်းသိလို့ မလုရကောင်းမှန်း သိလို့တောင်းစားတာလေ ဘာလို့ဝိုင်းရိုက်တာလဲ” ”အဲ့ဒါ” ”သားကတော့ အဲ့ဒီလူ့ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ အမြင်ကတ်တာ သူတို့လည်းပညာမဲ့လောက်တယ်… ပညာတင်မကဘူး နှလုံးသားလည်းမဲ့လောက်တယ်” ‘ဘာ” ”သားမေးပါရစေ အဲ့ဒိကဗျာကသေဋ္ဌးသားကို အကောင်းပြောတာလား မကောင်းပြောတာလား” ”ဟို မကောင်းပြောတာလေသားရဲ့””ဒါဆို သူ့ဝိုင်းရိုက်တဲ့သူတွေကကောင်းတယ်ပေါ့” ”ကဗျာက ပညာမဲ့တာကို မကောင်းပြောတာလေ” ”နှလုံးသားမဲ့တာကျတော့ရော စာနာစိတ်မဲ့တာကျတော့ရော မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်တာကျတော့ရော ကူညီရကောင်းမှန်းမသိတာကျတော့ရော” ”ကဗျာရဲ့ဆိုလိုရင်းကို သားသိအောင်ကြိုးစား” ”ဆရာမ ဒီမှာကြည့်” ”နင် နင် ရိုင်းလှချည်လား” ”သားဘာရိုင်းလို့လဲ” … Read more
ငရဲမျက်လုံးနဲ့ မကြည့်နဲ့ ကျောင်းဒကာ…
ငရဲမျက်လုံးနဲ့ မကြည့်နဲ့ကျောင်း ဒကာ…။ တစ်ခါသော်မစိုးရိမ်တိုက်သစ် မဟာနာယကချုပ် ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံသို့ကျောင်းဒကာတစ်ဦး ဆွမ်းချိုင့်ကိုကိုင်ပြီးတက်လာ၏။ ရောက်မဆိုက်ပင်မကျေနပ်တဲ့လေသံနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလျှောက်ထားလေ၏။ ဆရာတော်ဘုရာ့း တပည့်တော် ကျောင်းထဲကို ဝင်လာတော့ကျောင်းထောင့်နားမှာ ကိုယ်တော်ငါးပါး ခါးထောင်းတွေ ကျိုက်ပြီး ခြင်းခတ်နေကြတယ်ဘုရား။အဲ့ဒါ ဆုံးမပေးပါအုံး အမြင် မတော်ဘူးဘုရား။ “အေး ဟုတ်ပီကွ ဆုံးမပေးမယ်””ကဲ-ငါနဲ့ ခဏလိုက်ခဲ့လာ”ဆရာတော်က ဒကာကိုခေါ်ဆောင်ကာဦးဇင်းတွေ စာဝါတက်နေတဲ့ ဓမ္မသမ္ပတ္တိအဆောင်ဓမ္မမဟိဒ္ဓိအဆောင်သို့ ခေါ်ဆောင်သွား၏။ဆရာတော့်အဆောင်သို့ ပြန်ရောက်တော့ ဒကာကိုမေး၏။ ”မင်း-ခုန မြင်ခဲ့တဲ့ စာသင်နေတဲ့ကိုယ်တော်တွေနဲ့ခြင်းခတ်နေတဲ့ ကိုယ်တော်တွေ ဘယ်ဟာကများလဲကြည့်” “ဟာ- ဆရာတော့်စာသင်နေတာက ထောင်ချီရှိတယ်လေ။စာသင်နေတဲ့ကိုယ်တော်တွေက များတာပေါ့။ခြင်းခတ်နေတဲ့ ကိုယ်တော်က ငါးပါးထဲရယ်” “အေး မင်းတို့ ဒကာဒကာမတွေကအဲ့ဒီ စာသင်နေတဲ့ ဦးဇင်းတွေကိုကြည်ညိုရကောင်းမှန်းမှ မသိပဲ “ဘာမှ မပြောပလောက်တဲ့ လေးငါးပါးကိုကြည့်ပြီးငရဲယူနေကြတာ။ ငရဲမျက်လုံးနဲ့ ကြည့်နေကြတာ ငရဲကျတာတောင် နည်းသေးသကွာ” “မှတ်ထားကွ ဘာပဲကြည့်ကြည့် … Read more
အိမျရှမှေ့ာ သတ်တာလေးတဈလုံးပျေါမှာ ထိုငျနလေို့ အခြိနျကွာလာတော့ ဘာဖွဈလို့လဲ ထှကျမေးကွညျ့လိုကျသောအခါ အိမျရှမှေ့ာ သတ်တာလေးတဈလုံးပျေါမှာ ထိုငျနလေို့ အခြိနျကွာလာတော့ ဘာဖွဈလို့လဲ ထှကျမေးကွညျ့တာ ကိုယျတောငျငိုခငျြလာတယျ…။ ကလေး ဘဝထဲက ​ရှပေေါကျကံထဲက လကျဖကျရညျဆိုငျသေးလေးတဈခုမှာ အလုပျဝငျလုပျခဲ့တာ (၁၀)နှဈနီးပါးရှိပွီတဲ့ ဆိုငျတှေ ပုံမှနျရောငျးရခြိနျမှာ ညဉျ့နကျတဲ့အထိခိုငျးပွီး မနကျအစောကွီးထရတာမြိုး မငွီးမငွူလုပျပေးခဲ့ပါတယျတဲ့…။ ထမငျးစားရုံလေး ကြောခငျးတဈနရောစာလေးနဲ့သာ ကနြေပျခဲ့ရတဲ့… စာမတတျ ပမေတတျ တောက ကလေးတှကေို သကျသကျသာသာစြေးနဲ့ ခိုငျးခဲ့ပွီး အခုလိုဆိုငျတှပေိတျထားရခြိနျမှာတော့ တာဝနျမယူနိုငျဘူးဆိုပွီး ပွောဆိုမောငျးထုတျပါတယျတဲ့ …. လမျးပျေါထှကျလာရပမေယျ့ ပိုကျဆံလညျး တပွားမှမပါ နစေရာ စားစရာလညျးမရှိ မနျးလေးပွနျခငျြပါတယျဆိုလို့ ကိုသနျးမငျးကွှယျတို့ ပုလဲ မီးသတျတှဆေီ အကူအညီတောငျးခဲ့ပမေယျ့ သူတို့လညျး လူပွညျ့နလေို့ တာဝနျမယူနိုငျပါဆိုလို့ ဆိုငျကယျကယျရီလေးငှားပေးပွီး ရှပေေါကျကံ Q centre ကို … Read more